Izindaba ze-CCTV zinake futhi zaphenya isimo samamaski ahlinzekwa yinkampani yethu. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze sibe negalelo elincane kulesi sifo esiwubhubhane. Selokhu kwaqubuka inyumoniya eWuhan, inkampani yethu isiqale uhlelo ...Funda kabanzi »
Ngenxa yokuqubuka kwenyumoniya ebangelwa ukutheleleka okusha kweCoronavirus, inani labantu abanaleli gciwane laqala ukusabalala lisuka ku-Han Wu. Ngenkathi ukuvimbela ubhubhane oluphambili kanye nabasebenzi bezempilo bedonsa kanzima ukuyelapha, ukusetshenziswa kwemishini yokuvikela impilo kuyisimo ...Funda kabanzi »
Inyumoniya ivela ku-New Coronavirus! Inkampani yethu iqale kabusha ulayini wokukhiqiza ukuze isebenze isikhathi esengeziwe ukuze iqinisekise izisebenzi ezinikezela ngempahla: ibuyise ithikithi lokubuya futhi yashiya isikhathi esengeziwe Ngobusuku obandulela unyaka omusha ngo-2019, kwakuyisikhathi sokuthi abantu bagubhe iNtwasahlobo ...Funda kabanzi »
Iphrofayili yomsunguli webhrendi (YICHITA).
UMnu. RonghuaHeng(aka Roy), umsunguli we-Yichita brand, uthweswe iziqu kwelinye lamaKolishi Amane Obunjiniyela e-China, i-Dalian University of Technology, uMnyango Wezemishini Yamakhemikhali. Ekuqaleni kuka-2000, wajoyina i-Personal Safet...Funda kabanzi »
Yasungulwa ngo-2014, i-Shanghai YunQing Industrial Co., LTD (“YQ”) iyibhizinisi elisezingeni lokuqala elinekhono elikhulu lokukhiqiza elihlinzeka ngamamaski obuso angochwepheshe, asebenzayo nasezingeni eliphezulu. I-YQ ingumnikazi wemikhiqizo ye-"YICHITA" & "Miyuki" egxile emkhiqizweni wochwepheshe ...Funda kabanzi »